Nepal Deep | सार्वजनिक ऐना !!
भारतीय रेलमा यात्रा गर्दा शौचालयको सूविधा प्राप्त हुन्छ । कमोडमा वसेपछि चिन्तन र जिज्ञासा शक्ति निकै सक्रिय हुन्छ । एताउति हेर्दा तेहा लागेको ऐनाको माथिल्लो भागमा एसो लेखिएको रहेछ : “भारतीय रेल तपाईंको साझा सम्पत्ति हो । तेसैले यो ऐना पनि तपाईकै सम्पत्ति भएकोले सुरक्षा गर्नु पनि तपाईं कै दायित्व हुन्छ ।”
मैले प्रयोग गरिसकेपछि मसंगै सीटमा वसेका एकजना भलादमी शौचालयको प्रयोग गर्न पुगे । उनी निस्कंदा उनको हातमा त्यो ऐना थियो । मसंगै आएर बसे । मलाई खसखस लाग्यो । सोधिहाले “यो ऐना त सार्वजनिक सम्पत्ति होइन र तपाईंको हातमा कसरी ?
उहाँले भन्नुभयो “हो, एसको सुरक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो । यो कुरा ऐना माथि लेखिएको तपाईंले पढ्नुनै भयो होला ! यो यहाँ रह्यो भने कसैले फोर्न वा चोर्न सक्छ, मैले घरमा लगें भने सधैंका लागि एसको सुरक्षा हुन्छ । मैले आफ्नो दायित्व पालना गर्नपर्छ ।”
मलाई केही भन्नुनै थिएन । एस्तो देशभक्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति सजगता भेटेर म स्तम्भित भएँ । सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व एस्तो पो हुनुपर्छ !!
नेपालमा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न दिनरात नभन्ने अनेकौं स्वनाम धन्य नागरिक छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति को-कसले आफ्नो घरमा सुरक्षित राख्नुभएको छ, छिमेकीको घरमा, आफन्तको घरमा सुरक्षित राख्नुभएको छ भन्ने हामीले चिनेका, बुझेका र जानेका छौँ ! सबै धन्यवादका पात्र हुन् । हामी/तपाईंको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा पक्का छ किनभने विगतमा पनि हुँदै आएको हो ।
आगामी चुनावमा यिनैलाई भोट दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आफ्नो योगदान गरौँ ।